Sina - Fizahan-tany Tajikistan: Nanaiky hanatsara ny fiaraha-miasa ny filoha
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Sina - Fizahan-tany Tajikistan: Nanaiky hanatsara ny fiaraha-miasa ny filoha
Ny fizahan-tany no tao anaty fandaharam-potoana, rehefa nanao dinika ny sabotsy ny filoham-pirenena Tajikistan Emomali Rahmon sy ny filoham-pirenena sinoa Xi Jinping, nanaiky ny hampitombo ny fiaraha-miasa stratejika feno an'ny firenena roa tonta ho an'ny fampandrosoana sy ny fanambinana iraisana.
Nampanantena ny fahavononan'i Shina hanampy an'i Tajikistan izy hanatsara ny fanavaozana ny fambolena, handray anjara mavitrika amin'ny fananganana faritra ara-toekarena malalaka any Tajikistan, ary hanana fifanakalozana kolontsaina, fanabeazana ary fizahan-tany bebe kokoa.
Nankasitraka ny fifamatoran'i Shina-Tajikistan sy ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra samihafa ireo filoha roa tonta, ary niara-namaritra drafitra vaovao hananganana fifandraisana roa tonta.
Nanaiky ny hanolo-tena ny fireneny hampandroso ny finamanana amin'ny toetr'andro izy ireo ary hampiroborobo ny fananganana vondrom-piarahamonina miaraka amin'ny ho avy iraisan'ny zanak'olombelona.
Niarahaba an'i Tajikistan i Xi noho izy nahavita tamim-pahombiazana ny fihaonana an-tampon'ny fahadimy tamin'ny fihaonambe momba ny fepetra momba ny fifampiraharahana sy ny fananganana fahatokisana any Azia (CICA), tamin'ny filazany fa ny marimaritra iraisana sy ny vokatra azo tamin'ity hetsika ity dia mandefa hafatra miabo ary mampiditra angovo tsara ho an'izao tontolo izao.
Nanome toky ny fanohanana mitohy avy any Shina hatrany Tajikistan izy, izay mitazona ny fiadidian'ny CICA ankehitriny, mba hanondrotana bebe kokoa ny haavon'ny fiaraha-miasa amin'ny CICA.
Ny fifandraisana China-Tajikistan dia mitazona ny vanim-potoana fampandrosoana mandroso hatramin'ny nanorenan'ny firenena roa tonta ny fifandraisana diplaomatika 27 taona lasa izay, hoy i Xi, nanamarika fa lasa mpifanila vodirindrina, namana sy mpiara-miasa ary ny fifandraisana roa tonta dia ny tsara indrindra amin'ny tantara.
Faly i Shina mahita an'i Tajikistan milamina, mandroso ary mandroso, ary manohana mafy ny firenena amin'ny fanarahana làlam-pandrosoana izay mifanaraka amin'ny fanjakàny manokana, ary miaro ny ezaka ataony amin'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny filaminana, hoy i Xi.
Vonona ny hanamafy ny volavolan'ny fifandraisana roa tonta amin'ny lafiny Tajik i Shina, hanatsara ny haavon'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra maro, ary hiara-manangana ny vondrom-piarahamonina fampandrosoana sy ny vondrom-piarahamonina fiarovana an'i Shina-Tajikistan, hoy izy.
Nanentana ny roa tonta i Xi mba hifanohana hatrany amin'ny olana mifandraika amin'ny tombontsoany manokana. Nilaza izy fa nanohana sy nandray anjara mavitrika tamin'ny fananganana ny Belt and Road hatrany i Tajikistan, ary mahomby ny fiaraha-miasan'ny firenena roa tonta ao anatin'io rafitra io.
Nangataka tamin'ny roa tonta izy mba hampiorina bebe kokoa ny Belt and Road Initiative miaraka amin'ny paikadim-pirenena ho fampandrosoana an'i Tajikistan, hitrandrahana ny fahaiza-manao ary hampiakarana ny kalitaon'ny fiaraha-miasa, ary hampitombo ny fiaraha-miasa amin'ny fifandraisana, angovo, ny fambolena ary ny indostria.
Ny roa tonta dia tokony handalina ny fiaraha-miasa amin'ny ady amin'ny “hery telo” amin'ny fampihorohoroana, ny fanavakavahana sy ny ekstremista ary koa ny heloka bevava mifehy ny firenena, ary ny fanaraha-maso ny zava-mahadomelina sy ny fiarovana ny cyber, hiarovana ny filaminan'ny firenena roa tonta sy ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra.
Nandray an'i Xi tamim-pitiavana i Rahmon satria nitsidika an'i Tajikistan indray izy, nisaotra an'i Shina noho ny fandraisany anjara tamin'ny fahombiazan'ny fihaonana an-tampon'ny CICA fahadimy. Nanolotra fiarahabana noho ny faha-70 taona niorenan'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina izy, ary nirary fiononana sy fitoniana mandrakizay ho an'i Shina.
Manamarika ny lafiny Tajik manoloana ny fanamafisana ny fiaraha-miombon'antoka stratejika matanjaka amin'i Shina amin'ny iray amin'ireo laharam-pahamehana diplomatika, dia nisaotra ny ankolafy sinoa tamin'ny fanohanana sy fanampiana maharitra nataony i Rahmon.
Naneho ny fahavononany hanatsara ny fiaraha-miasa amin'ny firenena roa tonta amin'ny tetikasa lehibe toy ny angovo, petrochemicals, herinaratra hydro ary fananganana fotodrafitrasa ao anatin'ny rafitry ny Belt and Road, mba hanampiana an'i Tajikistan hahatakatra ny tanjon'ny indostrialy. Niantso ny roa tonta koa izy mba hanamafisana ny fifanakalozana isam-batan'olona amin'ny sehatra toy ny tanora, fanabeazana ary kolontsaina.
Tajikistan dia tapa-kevitra ny hiara-hiasa amin'i Shina amin'ny ady amin'ny “hery telo” amin'ny fampihorohoroana, ny fanavakavahana sy ny ekstremisma, ary ny heloka bevava an-tsokosoko, fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny filaminana sy ny fiarovana ny filaminana, ary ny fampitomboana ny fandrindrana amin'ny raharaham-pirenena maro ao anatin'ny Shanghai Cooperation Organization (SCO), ny CICA ary rafitra hafa, hoy Rahmon.
Taorian'ny resadresaka nifanaovan'izy ireo dia nanatrika lanonana ny lohan'ny fanjakana roa mba hanala sarona ny maodelin'ny fananganana tranobe parlemantera ampian'i Sina sy ny biraon'ny governemanta. Nampahafantarina azy ireo ihany koa ny drafitra famolavolana sy ny antsipirian'ny fiaraha-miasa amin'ireo tetikasa ireo.
Xi sy Rahmon dia nanao sonia fanambarana iraisana momba ny firosoana bebe kokoa amin'ny fiaraha-miasa stratejika feno an'i Sina-Tajikistan, ary nanatri-maso ny fifanakalozana antontan-taratasy fiaraha-miasa roa tonta.
Araka ny fanambarana niaraha-nahita dia hifanohana hatrany i Shina sy Tajikistan amin'ny olana mikasika ny tombontsoany lehibe, toy ny fiandrianam-pirenena, ny filaminana ary ny tsy fivadihana amin'ny faritany, ary hanome ny laharam-pahamehana ny fampandrosoana ny fifandraisana roa tonta amin'ny politika ivelany avy.
Ny roa tonta dia nivoady tamin'ny fanambarana mba hampandroso ny fifandraisana lalina eo amin'ny Belt and Road Initiative sy ny paikadim-pirenena fampandrosoana an'i Tajikistan nandritra ny vanim-potoana hatramin'ny 2030 miaraka amin'ny tanjona amin'ny fananganana vondrom-piarahamonina fampandrosoana an'i Shina-Tajikistan.
Nilaza ny fanambarana fa hanamafy ny fiaraha-miasa amin'ny fiarovana i Shina sy Tajikistan mba hananganana vondrom-piarahamonina misy fiarovana sy fiarovana an'i Shina-Tajikistan.
Ny roa tonta koa dia nivoady hanohy ny fiaraha-miasa amin'ny kolontsaina, fanabeazana, siansa, fahasalamana, fanatanjahan-tena sy ny faritra hafa ary koa ny fanitarana ny fifanakalozana eo amin'ny haino aman-jery, ny tropy sy ny fikambanan'ny tanora.
Hanohy hanamafy ny fifanohanana sy ny fiaraha-miasa amin'ny Firenena Mikambana, ny SCO, ny CICA ary ny rafitra maro hafa izy ireo, ary hifanakalo hevitra sy handrindra ny fijoroana ara-potoana amin'ny olana iraisampirenena sy isam-paritra lehibe hiatrehana ny fanamby manerantany sy isam-paritra, hoy ny ny fanambarana.
Niara-nivory tamin'ny mpanao gazety ihany koa ireo mpitarika roa tonta. Talohan'ny resadresaka nifanaovan'izy ireo dia nanao lanonana fandraisana lehibe ho an'i Xi i Rahmon.
Tonga teto ny zoma i Xi tamin'ny fihaonana an-tampon'ny CICA fahadimy sy ny fitsidihan'ny fanjakana tany Tajikistan, izay fizarana faharoa amin'ny dia roa an'i Xi Azia Afovoany roa an'i Xi. Nitsidika an'i Kyrgyzstan izy teo alohan'ny fitsidiham-panjakana sy ny fihaonana an-tampon'ny SCO faha-19.
Nanokatra hotely fahenina tao Dubai i Rove
Fampitandremana tsunami ho an'ny rojo Pasifika atsimo taorian'ny horohoron-tany 7.4